काठमाडौंमा तरकारीको मूल्य २३० प्रतिशतसम्म वृद्धि, कुन तरकारीको मूल्य कति पुग्यो? – OSNepal
काठमाडौंमा तरकारीको मूल्य २३० प्रतिशतसम्म वृद्धि, कुन तरकारीको मूल्य कति पुग्यो?
काठमाडौं । एक महीनाको अवधिमा काठमाडौंमा हरियो तरकारीको मूल्य २ सय ३० प्रतिशतसम्म बढेको पाइएको छ । कालीमाटी फलपूmल तथा तरकारी बजार विकास समितिको दैनिक मूल्यसूचीअनुसार गएको १ महीनाको अवधिमा हरियो तरकारीको मूल्य यति धेरै बढेको पाइएको हो ।
वर्षात् शुरू भएसँगै किसानहरूले तरकारी लगाएको जमीनमा धान रोपाइँ शुरू गरेकाले तरकारीको उत्पादन घट्न गई मूल्य बढेको हो ।
जेठ १६ गते प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ थोक मूल्य रहेको हाइब्रिड घिउ सिमीको मूल्य असार १६ मा २ सय ३० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै १ सय १५ रुपैयाँ कायम भएको पाइएको छ । स्थानीय काउलीको मूल्यमा २ सय प्रतिशतले वृद्धि हुँदै प्रतिकिलो २५ रुपैयाँबाट ७५ रुपैयाँ पुगेको छ । तितेकरेलाको मूल्य १ सय ४२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै प्रतिकिलो २७ रुपैयाँबाट ६५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी भिन्डीको मूल्य पनि १ सय १५ प्रतिशतले वृद्धि हुँँदै प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँबाट ७५ रुपैयाँ पुगेको छ भने राजमाको मूल्य पनि २ सय प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँबाट १ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ । घिरौला, लौका, बोडीलगायतका तरकारीको समेत प्रतिकिलो २० रुपैयाँदेखि ३५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ ।यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
अहिले वर्षाद्को समय भएकाले तरकारीको उत्पादन कम भएको छ । तरकारी उत्पादन भइरहेको जमीनमा धान रोप्ने काम भइरहेकाले पनि हरियो तरकारीको उत्पादन घटी मूल्य बढेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले आर्थिक अभियान दैनिकसँग बताए ।
‘खासगरी अहिले तरकारीको उत्पादन कम भएकाले नै मूल्य बढेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार यतिबेला भारतमा पनि वर्षाद्का कारण तरकारी उत्पादन घटेको छ । भारतबाट नेपालमा कम तरकारी भित्रिँदा पनि मूल्य बढेको हो ।
Next: डेब्यू फिल्म रिलिज नहुँदै सुनील शेट्टीका छोरालाई फिल्म अफरको ओइरो, ‘आशिकी ३’ मा पनि अभिनय गर्ने पक्का
Next: कमला नदीमा पानीको बहाव बढ्यो, स्थानीयवासीलाई सतर्क रहन आग्रह
चाँगुनारायणकी मिनाको घरमा ७ जना पुरुषलाई यस्तो अबस्थामा फेला पार्यो प्रहरीले, कोरोना कहरका बिच समातेर हाल्यो खोरमा
नेपाली सेनाको ट्रकले मोटरसाइकललाई ठ क्कर दिँदा १५ वर्षीया बिद्याको निधन, २ जनाको अबस्था ग म्भीर
टिकटक भाइरल एलेक्सले ४ बर्षमै दुनियाँ चकित पार्दै, भन्छन् पल शाह र आकाश श्रेष्ठसंग भिडियो खेल्ने रहर छ हेर्नुस भिडियो
काठमाडौँबाट वीरगञ्जतर्फ आउँदै गरेको सुमो दुर्घटना,चालको मृत्यु, घाइते पाँच जनाको उपचार हुँदै